Inona avy ireo fanamarinana azon'ny orinasanao?
Uniwell dia nahazo SC, Ksoher, Halal, Non-GMO, mari-pahaizana Import sy Export, Qualification Inspection Commodity, Qualification Transport Cargo, sns.
Mikasa ny hahazo izao: ISO9001, HACCP, FSSC22000
2.Niorina ny vokatra
Inona ny vokatra anananao?
Uniwell Bio dia mitrandraka ny soja ary ny polygonum cuspidatum nalaina ho vokatra voalohany, andrographis nalaina, phellodendron nalaina, epimedium nalaina, nalaina oliva ary vokatra hafa miaraka amin'ny tombony amin'ny famokarana ao Sichuan ho toy ny famenon-tsakafo, miaraka hamoronana ny firafitry ny vokatra maodely mpiady.
Ny famokarana ny voana soja dia ny fanitarana sy ny fivoaran'ny traikefa tany am-boalohany, ary izahay koa no orinasa mpamokatra soja lehibe indrindra any Shina. Ny ekipa mpitantana dia manana traikefa amin'ny famokarana sy fivarotana mihoatra ny 20 taona amin'ity vokatra ity.
Fepetra sy antsipirian'ny fiaraha-miasa
1.Fepetra fandoavana, fiovan'ny vidiny
Inona ireo fepetra sy fomba fandoavam-bola tohananao ary nahoana no miovaova ny vidin'ny vokatra?
Santionany sy santionany baiko: manome santionany amin'ny fanandramana sy fiampangana ireo santionany mihoatra ny habetsany izahay. Ny santionany voampanga sy ny baiko santionany dia takiana mba halefa aorian'ny fandoavana.
Fiaraha-miasa voalohany: mitaky fandoavana mialoha izahay amin'ny fiaraha-miasa voalohany amin'ny mpanjifa.
Mpanjifa maharitra: Ho an'ny kaomandy kely latsaky ny 1000 yuan, ny fandefasana dia hatao rehefa voaray ny fandoavam-bola. Ho an'ny mpanjifa maharitra, ny sampan-draharahanay ara-bola dia manana kaonty hierarchical, ny lava indrindra dia tsy mihoatra ny 90 andro.
Fepetra fandoavam-bola: Misy tsipika fampindramam-bola samihafa ho an'ny mpanjifa samihafa, matetika ny fe-potoana 30-90 andro.
2.Fonosana, Seranan-tsambo fandefasana, tsingerin'ny fitaterana, fametahana
Ahoana no hialanao amin'ny fahasimban'ny vokatrao?
Fonosana mahazatra: baoritra baoritra na fonosana amponga taratasy iray manontolo, ny haben'ny amponga dia Ø380mm * H540mm. Ny fonosana anaty dia ny kitapo plastika ara-pitsaboana misy fehy vita amin'ny plastika fotsy. Ny tombo-kase ivelany dia tombo-kase firavaka na tombo-kase mangarahara fotsy. Ny fonosana dia ampiasaina hitazomana 25KG.
Haben'ny fonosana: Amponga taratasy manontolo (Ø290mm * H330mm, hatramin'ny 5kg)
(Ø380mm * H540mm, hatramin'ny 25kg)
Amponga vy (Ø380mm * H550mm, hatramin'ny 25kg)
(Ø450mm * H650mm, hatramin'ny 30kg na vokatra ambany ambany 25kg)
Carton (L370mm * W370mm * H450mm, hatramin'ny 25kg)
Taratasy Kraft (hatramin'ny 20kg)
Fomba fitaterana: fomba 3 amin'ny fitaterana an-trano izay fitaterana logistika, express ary rivotra. Ny làlan'ny fitaterana iraisam-pirenena dia amin'ny rivotra sy amin'ny ranomasina, indrindra avy amin'ny seranan-tsambon'i Ningbo, Tianjin, Beijing ary Shanghai.
Toetran'ny fitehirizana: Asiana tombo-kase amin'ny hafanan'ny efi-trano tsy misy jiro, maharitra 24 volana.
Fitaovana fiarovana: Mampiasa kitapo misy tenona ivelan'ny amponga amin'ny fitaterana an-trano; Fitaterana iraisam-pirenena mampiasa paleta sy sarimihetsika mihinjitra.
Kitapo fitaterana: Amin'ny ranomasina- Ny vokatra dia hapetraka ao amin'ny trano fitehirizana ao anatin'ny herinandro raha misy tahiry, ny fe-potoana fandefasana dia tokony ho 3 herinandro; Amin'ny alàlan'ny Air- Mazava ho azy ny sidina dia halamina ao anatin'ny herinandro aorian'ny fametrahana ny kaomandy.
3.Momba ny OEM
Manohana ny baiko OEM ve ianao ary mandra-pahoviana ny fotoana fanaterana?
Fandefasana santionany: Ny santionany tsy tapaka alohan'ny 3:00 hariva amin'ny andro fiasana dia azo alefa amin'ny andro iray raha tsy izany dia aterina ny ampitso.
Quantity santionany: 20 g / kitapo maimaim-poana.
Fanodinana OEM: Manaiky ny baiko izahay ho an'ny vokatra manokana famaritana toy ny plastika ambany, residual solvent ambany, PAH4 ambany, isoflavones soja asidra benzoic ambany. Ny isan'ny kaomandy ambany indrindra an'ny isoflavona soja asidra benzoika ambany dia 10KG amin'izao fotoana izao ary ny andro fanaterana dia 10 andro. Ny vokatra OEM hafa dia mila manavaka ny tsingerin'ny fanodinana mifanaraka amin'ny vokatra.
Inventory: isoflavones soja, fitsapana 5% - 90% dia tahiry avokoa. Ny tahiry miorina dia: 5% 2MT, 40% 2MT, 40% ambany plastika 500KG, 40% sisa ambany solvent 500KG, 40% ambany PAH4 500KG, 80% 200KG, 90% 100KG.
Fotoana fanaterana: Ho an'ny vokatra misy tahiry mahazatra, ny andro fandefasana dia 2 andro. Ho an'ireo entana tsy misy tahiry ireo dia mety mila fotoana fampifangaroana sy fitiliana, indrindra fa lava ny tsingerin'ny mikraoba, ka mazàna 7 andro ny fotoana itaterana azy.
4.Mitera lehibe sy ny fepetra takiana amin'ny tsena
Inona ireo tsena lehibe amin'ny vokatrao? Na afaka mahafeno ny fepetra takin'ny tsena?
Tsena lehibe: Etazonia, Brezila, Belzika, Italia, Russia, France, Korea atsimo, Vietnam.
Etazonia: Non-Irradiated, Non-GMO, solvent residual <5000PPM.
Eoropa: Non-Irradiation, Non-GMO, PAH4 <50PPB, residual solvent (methanol <10PPM, tsy misy methyl acetate hita, residual solvent total <5000PPM).
Japan and Korea South: Non-Irradiation, Non-GMO, solvent residual <5000PPM, benzoic acid <15PPM.
Ahoana ny fomba hanomezan'ny orinasanao serivisy aorian'ny fivarotana?
Rehefa hitan'ny ozinina fa tsy mitombina na tsy azo antoka ny vokatra dia hatomboka ny fomba fitantanana ny fitadidiana ny vokatra ao amin'ny rafitra fitantanana kalitao. Rehefa manohitra ny vokatra ny mpanjifa dia hatao ny fandinihan-tena ataon'ny orinasa na fitsapana hafa ny antoko fahatelo hanamafisana raha tsy azo antoka ny vokatra na tsy mahafeno ny fepetra takiana. Raha voamarina ny vokatra tsy mandeha dia atombohy ho toy ny vokatra tsy azo antoka ny fomba fitadidiana. Rehefa tsy hita ny tsy fetezana amin'ny fitsapana an'ny antoko fahatelo, mifandraisa amin'ny mpanjifa mba hampivondrona ny fomba fitsapana ary hifampiraharaha amin'ny raharaha manaraka.
6. Inventory, fahaiza-mamatsy
Inona ny lisitr'ireo vokatrao sy ny fahafaha-mamatsy anao?
Ny fahafaha-manao fanodinana isan-taona an'ny Uniwell Bio dia fanafody medaly 6000 taonina ary ny vokatra azo sy ny lisitra dia aseho eto amin'ity latabatra manaraka ity:
Isoflavonin'ny soja tsy voavahan-drano 10%
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny orinasanao sy ny teboka fivarotana lehibe indrindra amin'ny vokatrao?
Soy Isoflavones5% ～ 40% Fomba solvent Mavo mavo ho mavo mavo <10 PPB <40 PPM
Soy Isoflavones80% Fomba solvent Fotsy manopy mavo Methanol <10 PPM <20 PPM
Soy Isoflavones5% ～ 40% Fomba solvent Mavo mavo Methanol 30-50 PPM 300-600 PPM
Soy Isoflavones80% Fomba solvent Fotsy manopy mavo Methanol 30-50 PPM 100-300 PPM
2.Maharitra ny akora
Ahoana no hifehezana ny kalitaon'ny akora?
Ny akora entin'ny orinasanay dia avy amin'ny faritra famokarana soja tsy GM any Heilongjiang, Sina. Hizaha toetra ny akora tsy tapaka izahay ary hanana fari-pahaizana momba ny kalitao mifandraika amin'izany.
3. Fakantsary transansika
Moa ve novaina tsy vita amin'ny génétique ny vokatrao?
Ny soja dia vokatra mahazaka otrikaina, ary tokony homena manokana ny tsy GM. Sina dia manafatra ny 60% ny soja, ny ankamaroan'izy ireo dia vokatra novaina (GM). Ny akora rehetra novidian'ny orinasanay dia avy amin'ny soja tsy GM amin'ny faritra mamokatra Heilongjiang. Ny mpamatsy rehetra dia manana rafitra tsy GM (IP) ary nandalo ny fanamarinana Non-GMO.
Ny orinasanay koa dia nametraka ny rafitra mifandraika ary nandalo ny fanamarinana Non-GMO.
Inona avy ireo tsena lehibe amin'ny vokatrao?
Tsena lehibe: Etazonia, Brezila, Belzika, Italia, Espana, Russia, France, Japan, Korea atsimo, Vietnam ary ny tsena terminal terminal misy ny vokatra fitsaboana.
5. firafitry ny vokatra
Inona no miavaka amin'ny andianao soya?
Ny isoflavones soja dia mizara ho vokatra voajanahary sy vokatra sentetika, izay 5 ka hatramin'ny 90% ny atiny.
Fomba solvent Mavo mavo ho mavo mavo <10 PPB <40 PPM
Fomba solvent Fotsy manopy mavo Methanol <10 PPM <20 PPM
Fomba solvent Mavo mavo Methanol 30-50 PPM 300-600 PPM
Fomba solvent Fotsy manopy mavo Methanol 30-50 PPM 100-300 PPM